Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Kismaayo (Sawirro) – SBC
Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Kismaayo (Sawirro)
Posted by SBC Editor on July 12, 2017 Comments
Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyrre ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo isagoo ka qayb gali doona shirka golaha wasiirrada xukuumadda oo markii ugu horreysay ka dhici doona Kismaayo.
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweyne ku xigeennada, qaar kamid ah golaha wasiirrada federaalka, xubno ka tirsan labada gole ee dowlad gobaleedka Jubaland qaar kamid ah salaadiinta iyo ugaasyada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kusoo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Raisul wasaaraha ayaa soo dhoweynta madaarka kadib loo galbiyay madaxtooyada Kismaayo halkaas oo isugu diyaarinayo shirka maalinta berri ah ka dhici doona aqalka nabada ee magaalada Kismaayo.
Illaa afar diyaaradood ayaa maanta Kismaayo u daabushay Golaha Wasiirada, Ilaalada mas’uuliyiinta Xukuumadda, Xogheynadooda, Fanaaniin iyo dad kale.
Madaxda heerka federaal ayaa xaflad soo dhoweyn ah loogu sameyn doona aqalka nabadda ee magaalada Kismaayo iyadoo ay halkaasi ka tumi ugu yaraan toban fannaaniin Soomaaliyeed ah oo wafdiga maanta la socotay.
Ugu dambeyntii shacabka magaalada Kismaayo ayaa si wayn ugu riyaaqay in shirka golaha wasiirrada lagu qabto Magaalo Xeebeedka Kismaayo.